Classic teepee - Moi Mili
Teendhooyinka Moi Mili waa fikrad wanaagsan oo ku saabsan diyaarinta koonaha ciyaarta canuggeenna ama hadiyad qoys mar mar ah. Wareegtadayada leh qaab caadi ah ayaa laga tolay maro qaro weyn. Gabi ahaan waxaa lagu gooyaa suuf.
Teepee wuxuu ku leeyahay daaqad dhanka bidix. Ushaheenna geedku way kala jeexan yihiin oo way jilceen, qaab dhismeedka oo dhanna waxaa lagu xidhay xadhko. Teendhooyinka Nice waxay leeyihiin derbiyada 5 iyo saldhig fadhiga, taasoo ka dhigaysa inay ka xasilloon yihiin oo ka ballaaran yihiin teendhooyinka leh saldhig laba jibbaaran. Waxaan soo saarnaa Poland, inta badan wax soo saarka asalka Polish. Waxaan kugu casuunaynaa inaad ku raaxeysato adduunkeena oo aan kugu dhiirigelinno inaad abuurto barnaamijyo Hindi ah.
Teendhooyinka teendhooyinka "Majorca ee roobka"
Teendhooyinka teendhooyinka "Cinab ayaa kacay"